Imihlangano - Ukufa Komkhiqizo WaseMelika | Martech Zone
Imihlangano - Ukufa Komkhiqizo waseMelika
NgoLwesibili, ngo-Mashi 23, i-2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kungani imihlangano incela? Iziphi izinyathelo ongazithatha ukwenza imihlangano ikhiqize? Ngizamile ukuphendula yonke leyo mibuzo kule nkulumo ehlekisayo (kepha ethembekile) emihlanganweni.
Lo ngumbono othuthukisiwe wesethulo engisenze mathupha. Lesi sethulo ku emihlanganweni kade iza okwesikhashana, sengibhalile mayelana nemihlangano futhi ukukhiqiza esikhathini esedlule. Sengike ngaya emihlanganweni eminingi, futhi eminingi yayo ibe wukuchitha isikhathi okwesabekayo.
Ngenkathi ngiqala ibhizinisi lami, ngathola ukuthi ngivumela isikhathi esiningi ukuthi ngikhishwe ohlelweni lwami ngemihlangano. Sengiyaliwe kakhulu manje. Uma nginomsebenzi noma amaphrojekthi engiwenzayo, ngiqala ukukhansela nokuhlela kabusha imihlangano. Uma ubonisana nezinye izinkampani, isikhathi sakho ukuphela kwakho onakho. Imihlangano ingadla leso sikhathi ngokushesha kunanoma yimuphi omunye umsebenzi.
Emnothweni lapho umkhiqizo kufanele ukhule khona futhi izinsiza zincipha, ungahle uthande ukubhekisisa imihlangano ukuthola amathuba okuphucula yomibili.
Kade ngifunda umugqa wokufunda muva nje futhi lezi zincwadi bezingikhuthaza kakhulu maqondana nebhizinisi lami nokukhiqiza kwami ​​- uSeth Godin's I-Linchpin: Ingabe Ubalulekile?, UJason Fried noDavid Heinemeier Hansson's Qalisa kabusha noTim Ferriss ' Umsebenzi we-4-Hour. Incwadi ngayinye ibhekana neMihlangano kuyo.
Tags: ukufa kwemihlanganoimihlanganoUkukhiqiza
Khulisa amakhasi ngokuvakasha ngakunye futhi wehlise ama-Bounce Rates
Ukuqashwa Kohlu lwe-imeyili, Okudingeka Ukwazi
Mar 24, 2010 ku-11: 23 AM
Isethulo esihle kakhulu uDouglas, ngiyabonga ngokwabelana!
Ngikhuphukele incwadi entsha kaGodin muva nje futhi ngithole ingxoxo ethokozisayo ngeLinchpin ku- Startups.com. Ungahlola lapha http://bit.ly/b219d6
Mar 24, 2010 ku-11: 44 AM
Imihlangano yokuhlela imihlangano. Ukufa kwanoma isiphi isikhungo sebhizinisi ukufaka ithalente ngalinye namakhono ngokuthenga okuhlangene kanye nokuyekethisa kwisisekelo esiphansi kunazo zonke. Ngivumelana nokuningi okushiwo nguDoug lapha.
Ukungezwani okuhle = ukungezwani okunempilo. Ngiyakuthanda ukuya emihlanganweni sengivele ngiveze okuthile ngaphandle kokuthenga ngokuhlanganyela. Yibize ngokuthi "ubufakazi bomqondo" futhi cishe ngaso sonke isikhathi uqinisekiswa ngabaphathi bokungena. Yizame: iyakha, iyasebenza, futhi inselela abantu ukuthi bacabange ngokwehlukile.